अन्ततः छोरी भन्ने आमा र कु’टिने छोरीको भयो कुराकानी,रुदै गरे भेट्ने बाचा (हेर्नुहोस भिडियो) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/अन्ततः छोरी भन्ने आमा र कु’टिने छोरीको भयो कुराकानी,रुदै गरे भेट्ने बाचा (हेर्नुहोस भिडियो)
अन्ततः छोरी भन्ने आमा र कु’टिने छोरीको भयो कुराकानी,रुदै गरे भेट्ने बाचा (हेर्नुहोस भिडियो)
एउटि केटिलाई पाँच जना केटिले कु”टेको देखिन्थ्यो । पाँच जना केटि मिलेर निकै अ स्लि’ल श’ब्द प्रयोग गर्दै एउटि केटिमाथि नि”’र्घा”त कु”टपि”ट गरेका थिए । सामाजिक संजाल फेसबुक लगायत धेरैतिर यो कुरा एकाएक भाइरल बन्यो । कहाँका हुन त यी के”’टिहरु अनि किन यस्तोसम्म गरे ती एउटिलाई भन्ने सबैतिर खुल्दुलीको बिषय बन्यो । निकै कु”’टपि”’ट गरिएको उक्त भिडियो हेर्दै कारुणिक देखिन्थ्यो । भिडियो हरेक नेपालीले कारबाहीको माग गर्दै अत्याधिक शियर गरेका थिए । प्रहरीले खोज्ने क्रममा आज झापाको दमकमा ती के””टिहरुलाइ फेला पारेको छ ।
आज झापाको दमकमा भेटिएका ती केटिहरुलाई प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । आज सम्पुर्ण पुर्बका मिडियाकर्मीको टिम उनिहरु बस्दै गरेको ठाउँ दमकमै पुगेर ती कु”’टा”’इ खाने र उनको परिवारलाई भेटेका छन । सुपर अनलाइन टिभी टिम त्यहाँ पुगेर सम्पुर्ण भित्री कुराहरू बुझेका छन ।
डराउदै कु”’टा”इ खाने बहिनिले के”’टाको निउमा यस्तोसम्म भएको बताइन । त्यसैक्रममा काठमाडौबाट हराइरहेकि एउटि युवती जसको उमेर भिडियोमा कु”टा”इ खानेसंग मिल्दोजुल्दो देखिन्थ्यो । काठमाडौबाट छोरी हराइन भन्दै मिडियामा आएकी आमा र भिडियोमा देखिएकी भाइरल छोरी बिच आज कुराकानी भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस : ताकमकोतमा परम्परागत सीप र प्रविधिको प्रयोगबाट मन्दिर निर्माण शुरु
म्यादीको धवलागिरि गाउँपालिका–७ स्थित ऐतिहासिक ताकमकोतमा १६औँै शताब्दीकै शैलीमा मन्दिर निर्माण शुरु भएको छ । पुरातत्व विभागले ऐतिहासिक महत्वको ताकमकोतमा परम्परागत सीप र प्रविधिको प्रयोग गरेर मन्दिर बनाउन लागेको हो । ताकमकोतबाट विसं १२४६ देखि १५४५ सम्म बगाले थापाले र १५४६ देखि १८८२ सम्म मल्ल राजाले राज्य सञ्चालन गरेका थिए ।
थापा र मल्लकालीन इतिहास झल्कने गरेर पुरातत्व विभागले नयाँ मन्दिर निर्माण गर्न लागेको कोतमन्दिर पुनःनिर्माण समितिका अध्यक्ष तेजिन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो । सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको रु ४५ लाख बजेटबाट मन्दिर पुनःनिर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
ठेकेदारले भक्तपुरका मजदुर, कालिगड ल्याएर मन्दिर बनाउन थालेको थापाले बताउनुभयो । माटो, ढुङ्गा र काठको प्रयोग गरेर मन्दिर निर्माण गर्ने पुरातत्व विभागले जनाएको छ । सांसदद्वय भूपेन्द्रबहादुर थापा र थममाया थापाको पहलमा विभागले बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
अठार मिटर लम्बाइ र १२ मिटर चौडाइको जमीनमाथि मन्दिर निर्माण हुने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै मन्दिर बनाइसक्ने लक्ष्य छ । सोह्राँै शताब्दीमा निर्माण भएको ताकमकोत विसं १९९० र २०७२ को भूकम्पका कारण जीर्ण बनेको थियो । चन्दा सङ्कलनबाट करीब रु ९० लाख खर्चेर समुदायले गत असोजमा ताकमकोत र जगन्नाथ अन्नपूर्ण मन्दिर पुनःनिर्माण गरेका थिए ।
सो मन्दिर सिमेन्ट, रड प्रयोग गरी पुनःनिर्माण भएको हो । ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्न पुरातत्व विभागले छुट्टै अर्को मन्दिर बनाउन लागेको बताइएको छ । मन्दिर संरक्षणका लागि धवलागिरि गाउँपालिकाले पनि रु १० लाख विनियोजन गरेको छ ।
पहिलो चरणमा कोतघर, अन्नपूर्ण–जगन्नाथ मन्दिर, सत्तल र सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिएको ताकमकोत पुनःनिर्माण समितिका अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो । कोतमा ऐतिहासिक महत्वका तो’प, त’रबा”र, खुँ”’डा, खु”’कु”’री, ढा”’ललगायतका हा”तह”ति”यार छन् ।
म्याग्दीको प्रमुख शक्तिपीठ मानिने ताकमकोतको जगन्नाथ अन्नपूर्ण मन्दिरमा पूजाआजा र भाकल गरेमा मनोकाङ्क्षा पूरा हुने विश्वास छ । जगन्नाथ, अन्नपूर्ण, दुर्गालगायत देवीदेवताको मूर्ति रहेका यहाँ नवदुर्गा, जेष्ठी पूर्णिमा, मङ्सिर पूर्णिमा, चैत्राष्टमी पर्वका अवसरमा विशेष मेला लाग्ने गर्छ । समुद्री सतहदेखि दुई हजार ५०० मिटरको उचाइमा अवस्थित ताकमकोतबाट गुर्जा, धवलागिरि, निलगिरि, अन्नपूर्ण र माछापुच्छ«े हिमशृङ्खलाको साथै मनोरम पहाडी भूगोल, ग्रामीण बस्ती र सूर्योदयको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ ।
बाबुकै कारण छोरीको भविष्य अन्धकार देख्छु भन्दै छिमेकीले गरे कमलाको बुवाको बारेमा यस्तो कुरा ! (भिडियो सहित)
एअरपोर्टमा यस्तो धरधरी रुदै गरेको अवस्थामा फेला परिन सेड्रिना : बुवालाई सम्हाल्न गार्हो भिडियो सहित
अब जे’लबाट छुटदैछन् प्रमिला ! युट्युवरको प्रश्नले रिसाए आफन्त, सन्तोष दाइकी दिदी र छोरा मिडियामा (भिडियो हेर्नुस्)